သင်္ဃန်းကျွန်း၊ (၁၆)ကွေ့နီ (20 x 60) 1RC အရောင်း
သင်္ဃန်းကျွန်း၊ (၁၆)ကွေ့နီ (20 x 60) 1RC သိန်း 1700...
Ad Number S-10017660
Ad Number S-10017637
ကမာရွတ်၊ အင်းယားလမ်း (80 x 130) 2RC အရောင်း
ကမာရွတ်၊ အင်းယားလမ်း (80 x 130) 2RC M-3 (ပြင်ပြီး) 1 Sqft -4သိန...
41,600 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10017624
Ad Number S-10016702
၉မိုင် အေဝမ်းရှိ အိမ်နှင့်ခြံ ရောင်းမည်။
TYM366 For Sale-ရောင်းမည်။ 🙏၉မိုင် အေဝမ်း လုံးချင်း ရောင်းမည်.. 🙏ခြ...
Ad Number S-10016684
ကုန်းမြင့်ရိပ်သာ အိမ်နှင့်ခြံ ရောင်းမည်။
Ad Number S-10016652
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ နေရာကောင်း အသင့်နေ ကွန်ဒိုအခန်း ရောင်းရန်ရှိပါသည်
Ad Number S-10023683
ေရႊမင္းသမီး အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ Close
Ad Number S-10023682
မြောက်ဒဂုံ၊ 42-ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်းအနီး၊ လမ်းကျယ်၊ မြေကွက်ကျယ် ရောင်းရန်ရှိပါသည်
Ad Number S-10023681
Golden Parami Condo ရှိ အသင့်နေအခန်းကောင်းလေး ရောင်းရန်ရှိပါသည်
Ad Number S-10023680
ဗဟန်းမြို့နယ် အဆင့်မြင့်လုံးချင်းအိမ်ယာဝန်းရှိ Modernized Designဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့်...
Ad Number S-10023679
နေရာကောင်း ထောင့်ကွက် အသင့်နေ RC-8ထပ်ခွဲ ကွနိဒိုအဆောက်အဦး ရောင်းမည်
Ad Number S-10023678
29,500 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10023677
Ad Number S-10023676
ချမ်းသာဂုဏ်ရောင်အိမ်ရာဝန်းကွန်ဒိုအရောင်းခန်း 1650 sqft
Ad Number S-10023650